Sida loo beddelo xajmiga iyo xagasha dhowr qoraalo ee Microstation iyo AutoCAD - Geofumadas
Sida loo beddelo xajmiga iyo xagasha dhowr qoraalo ee Microstation iyo AutoCAD
Janaayo, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Microstation-Bentley
1. Iyadoo AutoCAD
Qoraalka aad rabto inaad wax ka bedesho ayaa la doortaa
Hawl-galka guriga (wax-ka-beddel / alaab) ama amarka qoraalka mo
Cabbirka qoraalka wuxuu ku qoran yahay miisaan
Ku qor xagasha ee Rotation ... iyo voila.
2. Iyadoo Microstation
Si aad u sameysid Microstation XM waxay u dhowdahay sidii ay u sameyn lahayd AutoCAD nidaamka hore.
Si taas loo sameeyo this Microstation V8 aadan la guddiga guryaha, sababta oo ah ma aha sida functional sida AutoCAD, laakiin waxaa la samayn karaa iyadoo la isticmaalayo codsi Visual Basic in la iman Microstation yeedhay TransformText.mvba, habka soo socda (tarjumay karaa Isbaanish Askinga):
Mashruucyada / macro / mashruuc Maamulaha / mashruuca
Waxaan baadhay Barnaamijka Explorer Files / Bentley / meesha lagu shaqeeysto / Nidaamka / vba / tusaalooyin / textExamples.mvba
Ka dib markaad ku dhejiso, dooro OptimumText option, ka dibna Ku orod.
Markaas in sanduuqa wada hadal aad dooran kartaa baaxadda (qaraabo in ay hadda leeyihiin qoraalka) tusaale ahaan, haddii size labo jeer aad rabto in aad ku qortaa 2, haddii qeybtii 0.5 size ay doonayaan in ay qoraan. Waxa kale oo aad dooran kartaa ka leexdo, waxaa sida xagal ka bari in bilow ah jihada ka soo hor jeedda.
Post Previous«Previous Shaqada xorta ah ee guriga
Post Next Samee model dijitaal ah oo dijitaal ah (MDT / DTM) leh Microstation oo ku habboon orthophotoNext »
2 wuxuu ku jawaabayaa "Sida loo beddelo cabirka iyo xagalka qoraallada dhowr ah ee Microstation iyo AutoCAD"
Anigu ma cadda inaan ahay,
laakiin haddii aad rabto in aad u guurto qoraalka ka mid ah lakabka in kale, waxba dhicin, aan loo wareejiyo haddii aad beddesho hanti.
Waxaad dooran kartaa qoraalada, waxaadna bedeshaa lakabka.
Gerardo Ramos isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan haystaa AutoCAD 2019 waxaanan heystaa qoraal ah 90 ° kaas oo aan bedelay dhererkeeda. Ku dheji lakabka
Lakabka kale waxaan haystaa qoraalo kale 0 ° laakiin waxaan rabay in aan u beddelo lakabka koowaad aan leexin.
Sideen u samayn karaa?